Ministry Launches Swiss Challenge for Housing Megaproject | Myanmar Business Today
Home Investment & Finance Ministry Launches Swiss Challenge for Housing Megaproject
The Ministry of Construction has launchedaSwiss challenge forahousing megaproject afteralocal company proposed to developa‘smart district’ on 1,000 acres of land near Ayeyarwon-Yadanar Housing in Dagon Seikkan Township.
Interested parties are required to submitaproposal including project plan and capital expenditure to the Department of Urban and Housing Development by April 9.
The project will include 35 residential buildings with over 13,000 apartment units, commercial buildings and infrastructure such as roads, electricity, sewage system, internet connectivity andaCCTV system.
It will also haveapolice station, fire department, school, playground and community center.
The project’s initial design shows that there will be parking spaces for passenger buses as well asashopping center, hotel, restaurants and recreation center.
မြေဧက တစ်ထောင်ကျော်တွင် အိမ်ရာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် Swiss Challenge ဖိတ်ခေါ်
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ဧရာဝဏ် – ရတနာအိမ်ရာစီမံကိန်းအနီးရှိ မြေဧက တစ်ထောင်ကျော်တွင် Smart District အိမ်ရာစီမံကိန်းအဖြစ်အကောင်အထည်ဖော်ရန် တိုင်းရင်းသားပိုင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုက မြို့ပြနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနသို့ စီမံကိန်းရေးဆွဲတင်ပြလာသဖြင့် စီမံကိန်းအတွက် Swiss Challenge အဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် အဆိုပြုလွှာများကို ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ကနဦးအဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲမှုကို ယှဉ်ပြိုင်ရန်စိတ်ဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များသည် အဆိုပြုလွှာကို ၂၀၂၀ ဧပြီလ ၉ ရက်တွင် နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း မြို့ပြနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ Swiss Challenge အရ အဆိုပါစီမံကိန်းတင်ပြချက်အတိုင်း ကုန်ကျစရိတ်မည်မျှဖြင့် တည်ဆောက်နိုင်ကြောင်း အခြားအဆိုပြုသည့် ကုမ္ပဏီများကလျှောက်ထားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြထားသည့် စီမံကိန်းဧရိယာတွင် တည်ဆောက်ဆဲအဆောက်အအုံ (၃၅)လုံးပါဝင်ပြီး လူနေအိမ်ခန်းများ၊ စီးပွားရေး အဆောက်အအုံများ၊ လမ်း ၊မီး၊ မိလ္လာစနစ်များ၊ IT ၊Network ၊CCTV ၊ လုံခြုံရေးစနစ်စသည့် အခြေခံ အဆောက်အအုံ များ အဆင်မြှင့်တင် တည်ဆောက်ရေး ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းပြင် ရဲစခန်း၊မီးသတ်စခန်း၊ကျောင်း၊အားကစားကွင်းနှင့် လူမှုရေးအဆောက်အအုံများကိုပါ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ရန် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျပ် ၂၅၀ ဘီလီယံခန့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဖြစ်ပြီး အိမ်ခန်းပေါင်း တစ်သောင်းသုံးထောင်ကျော်ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံများအပြင် ခရီးသည်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ ဟိုတယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင်များ၊ ပြည်သူများအပန်းဖြေနိုင်မည့်နေရာများ ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကနဦးစီမံကိန်းဒီဇိုင်းတွင်ပါဝင်ထားသည်။
Previous articleYSX to Increase Stock Trade Matching Times to 7
Next articleRegulator Greenlights New Insurance Products